#BlogIndiana: Jason Falls, Blogger ary ireo andriamanitra Google | Martech Zone
Alakamisy, Aogositra 13, 2009 Alatsinainy Desambra 29, 2014 Douglas Karr
Fanombohana tsara androany Blog Indiana, ary Jason Falls Nanomboka ny ranom-boankazo tamin'ny alàlan'ny filalaovana ny maha-zava-dehibe ny fanatsarana ny motera fikarohana, ny famoahana fisalasalana sasany momba ny ghostblogging, ary ny firesahana amin'ireo bilaogera fa maninona raha tsy manaraka ny lalàna. Ny lahateny fototra nataon'i Jason dia lalindalina kokoa sy lalina kokoa… saingy ireo no zavatra niraikitra tamin'ny fandokoako.
Farafaharatsiny mba mahatsapa ny fihetsiko ny iray amin'ny namako… ary nahatsapa izany aho roa ghostbloggers mipetraka eo aoriako ka azoko antoka fa fantatro izay noeritreretin'izy ireo!
Mihevitra ve aho fa tokony hanaraka fitsipika ny bilaogera?
Manaiky 100% amin'i Jason aho! Tsy misy lalàna. Toa an'i Alexander Graham Bell namoaka boky momba ny fampiasana finday taona vitsivitsy taorian'ny namoronany azy ireo. Mbola tanora ny tontolon'ny bilaogy ary izay mety aminao dia mety tsy mandeha amin'ny hafa. Efa fantatry ny mpamaky ny zavatra tsapako mandainga ny media sosialy ary ny lalàna dia lainga.
Tsy manana lalàna… izay ananantsika, na izany aza, dia traikefa kely amin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo ary miaiky hoe inona no mandeha sy izay tsy mandeha mba hahafahantsika mampita izany fahalalana izany mba hitsapana ny hafa.
Tokony tsy hiraharaha ny fikarohana ve ireo bilaogera?
Saika nivoaka avy teo amin'ny sezany i Chris Baggott rehefa nanolo-kevitra i Jason fa tsy hanahy ny amin'ny fikarohana. Nametraka fanontaniana iray nahaliana ihany koa izy: “Moa ve ianao manimba ny sain'ny olona amin'ny tsy fanananao ny atiny… atiny lehibe… hita ao amin'ny fikarohana?”. Mazava ho azy fa tsy noheverin'i Jason izany.
BTW: Tsy adihevitra be loatra akory izany - resaka mahomby momba ny paikady fanaovana bilaogy fotsiny. Jason dia nanao asa mahafinaritra ary tena mangarahara momba ny antony tsy tokony hiahiany amin'ny fikarohana. Ny fanontanian'i Chris dia iray izay tena nanangana hevitra marim-pototra, na izany aza. Raha misy mpikaroka mitady anao… ary tsy mahita anao izy ireo, tsy olana ve izany?
Olana amin'ny motera fikarohana ve izany? Sa ianao no olana?
Ny valinteniko dia ny olanao. Malala-tanana loatra i Google tamin'ny famatsiana ny fitaovana ilaina rehetra hahalalan'ny olona ny fomba fanatsarana ny tranokalany sy ny atiny. Google aza dia manome antsika ny laharantsika amin'ny alàlan'ny teny lakile na fehezanteny, ary ny volavolan-karoka amin'ireo teny lakile voalaza ireo - amin'ny fanekena fa ireo izay maniry ny hifaninana amin'ity hazakazaka ity dia mila manitsy.
Halako ny milalao amin'ireo andriamanitra Google toy ny olon-drehetra. Maniry aho raha afaka manoratra atiny mahavariana ary tsy tokony hiahiahy momba ny fanonona teny lakile, teny mitovy hevitra ary fitambaran'ny teny lakile ao anaty atiko. Ataoko anefa, mba hahitan'ny olona mitady ireo valiny ireo ao amin'ny bilaogiko! Ary tadiavo izy ireo fa mahita!
Momba ny mety daholo! Mahomby ve ny Social Media Explorer? Eny Mazava ho azy. Nahazo fifampidinihana sy firesahana firesahana tao amin'ny bilaoginy i Jason? Eny, manao izany izy. Saingy misy ny fahafahan'i Jason mahazo fifamoivoizana bebe kokoa sy fanontanina vaovao amin'ny alàlan'ny fanatsarana fotsiny ny atin'ny bilaoginy. Tsy mampirisika ny hiteny tsy voajanahary aho - mametraka teny fanalahidy sy andian-teny vitsivitsy izay misy heviny sy mahasarika ny fivezivezena hikarohana. Simple mitoraka bilaogy ho an'ny SEO.
Zahao ny fomba fanatanterahan'ireo bilaoginay dia ho hitanao fa somary nahatratra kokoa ny bilaogiko… fa i Jason dia nirotsaka an-tsehatra bebe kokoa tamin'ny sehatra media sosialy. Mpanolotra tsy manam-paharoa izy (mbola mianatra aho) ary mpandahateny mampiala voly. izy mendrika fifantohana bebe kokoa. Mieritreritra aho fa manimba ny fahafahan'ny bilaoginy ny fanaovana tsinontsinona ny fotoana mety - ary tsy mandray soa amin'izany koa izy.
NAOTY: Nandefa an'i Jason aho ny eBook vaovao tsy andoavam-bola. Manantena aho fa niova hevitra izy. 🙂
Ghostblogging dia asa lehibe
Rahoviana no farany nahazo fampiroboroboana ny asany ny lehibenao? Nipetraka teo foana ve ianao rehefa nampiakatra ny tohatra? Sa nanelingelina anao kely fotsiny ny nanampianao nametraka azy ireo teo? Izany no Ghostbloggers do. Ghostblogging dia tsy teny maloto ary tsy asa maloto fa fiteny tsy mampino. Ghostblogger lehibe iray manadihady ny loharano ary manoratra marina ireo lahatsoratra amin'ny anaran'ny azy ireo.
Heveriko fa nanana lohany lehibe loatra aho hanao an'izany. Mila crédit amin'ny toerana tokony ahazoana trosa aho!
Sandoka ve izany? Mangarahara ve izany? Tsy mino aho hoe! Raha nipetraka aho ary nanao tafa sy dinika taminao ary nosoratako ny valinteninao rehetra - fa sady nanoratra azy tamim-pahakingana no tamina fomba fialamboly, mampihena ny maha-olona anao ve izany? Misy anarana lehibe eto amin'ny tontolon'ny fitorahana bilaogy izay tsy manoratra ireo olon-tiany manokana - halako ny mampita vaovao aminao!
Raha mbola misy ny fototr'ireo lahatsoratra bilaogy ireo ny hafatrao, maninona no misy olona miahy fa olon-kafa no nanoratra azy? Fantatrao ve izany Ny kabary fitokanana an'i Obama dia lehilahy fotsy hoditra 27 taona no nanoratra tao Starbucks? Manova ny hevitrao momba an'i Obama ve izany? Sandoka ve izy? Tsy mangarahara ve izany?
Heveriko fa tsy izany… Noheveriko fa kabary mahatalanjona izany, ary tsy manana ahiahy aho fa ny teny rehetra nolazainy no tian'i Obama hambara!
Tags: valin'ny orinasafiarovana amin'ny mailakaemarketingFamandrihana sakafompanamboatra rindranasa findayReservations
Aug 14, 2009 amin'ny 4: 35 AM
Mahafinaritra ny fanitarana ny fifanakalozan-kevitra sy adihevitra am-pirahalahiana izay notarihin'i Jason Falls tao amin'ny #blogindiana androany maraina. Ny manahirana ahy dia ny hoe mbola miombon-kevitra aminao aho ry Jason sy Chris. Mino aho fa miverina amin'ny fandikana ny fitsipika izany. Raha tsy miraharaha ny fikarohana i Jason ary miasa ho azy izany, dia aoka izany. Raha tsy miraharaha an'izay tsy mahita azy izy, raha tsy hoe tsy firaharahiana ratsy izany, dia aoka izany. Raha ny bilaogera hafa, anisan'izany ny tenanao, Chris, ny tenako na ny mpanjifako te-hanararaotra ny herin'ny bilaogy ho an'ny SEO, lalao on. Tohizo hatrany ny resaka, tiako ny mianatra avy amin'ny resaka sy ireo mandray anjara amin'izany.
Aug 14, 2009 amin'ny 10: 29 AM
Doug, tena mitombina ary nilaza tsara. Azoko antoka fa hahita ny fahadisoan'ny lalany i Jason amin'ny fandresen-dahatra feno fisainana toy izany. Mety hieritreritra ny ohatra faran'izay ratsy indrindra izy raha ny momba ny bilaogy momba ny SEO sy ny ghostblogging. Mety hitovy hevitra aminy isika. Tahaka ny fampitahana dokambarotra mahomby, mihantsy na mampiala voly, amin'ny fahitalavitra nataon'i Peter Francis izay fantatrao na "apetaho mivantana amin'ny handrina." Mila manana marketing marani-tsaina isika.
14 Aogositra 2009 à 4:28
Naoty ara-tantara haingana roa…raha tsy nanoratra boky momba ny fampiasana ny telefaona i Bell, dia nisy fifanarahana fanekena teo amin'ny orinasany sy ny Western Union fa tsy azo ampiasaina amin'ny telegrafy izany. Izany ihany no tsara raha tsy i Thomas Edison no namorona ny mpanelanelana bokotra karbonika (mikrofona) izay nahazatra ny kabary lavitr'ezaka. Ary raha niresaka momba ny lahatenin'ny filoham-pirenena, dia nianatra kely momba ny fanodinkodinana ny gazety i Edison taorian'ny namerenan'ny filoha Andrew Johnson ny lahateniny tamin'ny 11 Septambra 1866 ho an'ny Associated Press. Raha mbola ataon'ny mpitoraka blaogy matoatoa ho tsara kokoa noho ny tena izy ny lehibeny, dia tsy hitaraina ny lehibeny.
16 Aogositra 2009 à 6:46
Miresaha momba ny Information Overload! tpt.
Tena liana tamin'ny famakiana ny an'ny Filoha Andrew Johnson ary matetika tsy nahita tory teo am-pandinihina ny fahamendrehan'ny fahaizany miteny ampahibemaso. TY Mike, tsy nieritreritra mihitsy aho fa i Thomas Alva no ao ambadiky ny fahaizan'i Johnson noheverina ho mahay miteny.
Mitsambikina mankany amin'ny lohahevitra anio; Moa ve tsy tokony hoheverintsika fa ny ankamaroan'ny olo-malaza rehetra dia mamoaka hafatra ho an'ny daholobe amin'ny fomba sasany? Nampandrenesina isika izao fa nisy ny soratra matoatoa tamin'ny andron'ny Filoha Johnson voalohany saingy iza no mahalala hoe oviana no teraka ilay asa tanana.
Apetrako aminao io fanontaniana io miaraka amin'ny fanontaniako manokana… iza no tena mpanoratra ny Baiboly? Tsy toa ahy ho Andriamanitra na Jesosy nefa dia ekentsika ho "Tenin'Andriamanitra" izany. Efa niasa 2,000 XNUMX taona lasa izay ireo GHOSTWRITER'S IN THE SKY voampanga!
Azo inoana fa tsy ho rendremana mora aho anio alina satria efa nanomboka nanontany tena aho hoe na i Karr no nandoa an'i Ghostwriter sy Andriamanitra nandoa ny lol.
18 Aogositra 2009 à 1:04
Angamba asa mendri-kaja ny fanaovana blaogy matoatoa, saingy tsy mendri-kaja mihitsy ny olona mampiasa serivisy toy izany. Farafaharatsiny tsy marin-toetra amin'ny mpamaky azy izy.
19 Aogositra 2009 à 8:00
Lahatsoratra tsara Doug. Efa ela aho no nieritreritra an'io olana io. Raha ny marina dia nanoratra lahatsoratra aho indray andro momba ny ny fifandraisana misy eo amin'ny lafiny sosialy sy ny fikarohana.
Tsy tao amin'ny bilaogy Indiana aho, noho izany dia tsy manana foto-kevitra momba ity resaka manokana ity aho. Heveriko fa tena zava-dehibe ny fahitana fahitana. Ny eritreritro dia misy antony 3 manan-danja amin'ny fahazoana fahitana amin'ny fikarohana, mifandraika amin'ny bilaogy.
Ny voalohany dia votoaty. Rehefa nahatratra lahatsoratra mihoatra ny 100 ny bilaogiko dia nanomboka nahazo fikarohana betsaka momba ny teny samihafa aho. Tsy azoko sary an-tsaina hoe firy ny fikarohana azonao azonao amin'ny arivo mahery!
Ny faharoa dia ny fanatsarana anatiny. Heveriko fa tena zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny permalinks URL-nao, ny lohatenin'ny lohateny, ny lohatenin'ny lohateninao ary ny atiny ankapobeny dia misy ny teny fanalahidyo mba ho hita ao amin'ny Google ny hafatrao. Hitako fa mora ny manao izany raha azonao ny fototra fototra.
Ny antony fahatelo manan-danja indrindra dia rohy, ary tsy maintsy mino aho fa ny fananganana ny marikao amin'ny tranokalan'ny media sosialy dia amin'ny FAR no fomba mora indrindra hahatonga ny olona hifandray aminao.
Dia manaiky an'i Jason ve aho? Eny ary tsia.
Tsy misy dikany amiko ny tsy miraharaha tanteraka ny fanatsarana anatiny ny tranokalanao. Nahoana no tsy tianao ny hahita anao i Google?!
Saingy, heveriko fa misy dikany kokoa ny fifantohana angovo bebe kokoa amin'ny fanatrehanao ara-tsosialy, ny fanajàna ireo bilaogera namany, ny fahazoana fahefana amin'ny alàlan'ny rohy, izay hanampy amin'ny fanatsarana ny fikarohanao amin'ny farany.
Ny mahatezitra ahy dia rehefa ny olona no manao toy ny hany antony tokony hanaovanao bilaogy dia ny hahazoanao fikarohana. Tsy maintsy mino fotsiny aho fa zava-dehibe ny mametraka fifantohana mafy amin'ny paikadinao sosialy. Raha mibilaogy betsaka amin'ny fampiasana ny tenimiafinao ianao dia hahazo karoka maro ihany koa.
Ankehitriny, asa mendrika ve ny Ghostblogging? Azo antoka! Azo scalable ve? Tsia, raha tsy hoe mitantana masoivoho fitorahana bilaogy matoatoa ianao. Raha mpitoraka bilaogy ianao dia tsy afaka manao afa-tsy asa be loatra ka noho izany dia mahazo vola be ihany ianao.